window7problem & function key problem - MYSTERY ZILLION
window7problem & function key problem
January 2012 edited January 2012 in Help Desk
ကျွန်တော်စက်မှာ window7တင်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွျန်တော့် function key & wireless key တွေသုံးလို့မရတော့ဘူး။ နောက်ပီး စက်ကို အလင်းအမှောင်လည်း ညှိလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ battery ကြိုးတပ်မှ ပြန်လင်းလာတယ်။ အမှန်ဆို မတပ်လည်း အလင်းအမှောင်ကို function key ကနေ ညှိလို့ရပါတယ်။ အခုက မရလို့ပါ။ စက်က ဘက်ထရီ မကောင်းရအောင်ကလည်း အသစ်ကြီးဗျ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ၀ိုင်းဖြေရှင်းပေးပါအုန်းဗျာ
Please check that your driver is working properly or not. Perhaps it needs to update the driver. See in device manager for driver problem.
သိပ်မှန်တယ် အကို။ ကျေးဇူးပါဗျာ Driver လိုနေတာပါ။ ကျွန်တော်အခုပြန်တင်လိုက်တော့ အဆင်ပြေသွားပါပီ.